Ngaba Iicawa Ziyaphelelwa?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
UGaffar owazalelwa eTurkey wayengayithandi into yokuba kuthiwe uThixo unenzondo, nto leyo awayeyifundiswe ecaweni yakhe. Umfazi wakhe uHediye waqalisa ukuyithandabuza icawa yakhe xa wayeneminyaka esithoba nje kuphela. Uthi: “Ndandifundiswe ukuba uThixo ubuceba kwangaphambili ubomi bomntu. Ekubeni ndandiyinkedama, ndandidla ngokuzibuza ukuba, ‘Ndenze ntoni ukuze ndibe kule meko?’ Ndandidla ngokulila ubusuku bonke. Ndathi ndisiba neminyaka eyi-15 ndabe ndingasayithandi icawa yam.”
NGABA nawe uyekile ukuhamba icawa? Ukuba kunjalo, yazi ukuba asinguwe wedwa. Kumazwe amaninzi bayanda abantu abathi bona abahambi cawa—nto leyo ebonisa ukuba iliwa libhek’ umoya kwiicawa. Amanye aloo mazwe aboniswe apha ngezantsi.
Uphando lubonisa ukuba basondele kwi-50 pesenti abantu abathi abahambi cawa. Yona ke i-10 pesenti ithi “ayikholelwa kuThixo.” Ngo-2010, omnye umfundisi wathi ubone “abantu abaninzi beyilahla inkolo yobuKristu kule minyaka iyi-40 idluleyo.”
Uphando lubonisa ukuba yi-37 pesenti kuphela ethi ingamakholwa. Abanye bathi abakholelwa kuThixo okanye abayi kwaukuya ecaweni. Imagazini iThe Economist ithi kweminye imimandla yalapha, inkolo yamaKatolika ekwakukholelwa kuyo ubukhulu becala, “iyaphelelwa.”
Inani labantu abaphelelwa lukholo liyanda eIreland. Basondele kwi-45 pesenti abantu abangahambi cawa, ngoxa i-10 pesenti yona ingakholelwa kuThixo. I-Ireland iphakathi kwamazwe alishumi abonakala enkqenkqeza phambili ngokuba nabantu abangakholelwayo kuThixo. Iingxelo zeendaba zithetha “ngesiphelo sobuKatolika eIreland.”
Uphando lubonisa ukuba i-16 pesenti ithi ingamakholwa eJapan, ngoxa i-62 pesenti ingayi ecaweni okanye ingakholelwa kuThixo.
Phakathi kuka-2005 no-2012, inani labantu ababesithi bangamakholwa eMzantsi Afrika lehla nge-19 pesenti.
Ngo-2013, uphando lubonise ukuba i-60 pesenti yabemi baseTunisia ayisayi kwicawa yamaSilamsi kunoko izithandazela emakhaya. Isizathu esichaziweyo kukuba bekukhuthazwa izenzo zenkohlakalo.
Ukususela ngo-2005, inani labantu abathi bayakholwa lehle nge-13 pesenti. Kwaba bantu, ngumntu omnye kwabahlanu ongazidibanisiyo necawa yaye abaneminyaka engaphantsi kweyi-30, ngumntu omnye kwabathathu. Iicawa ezininzi ziyavalwa nyaka ngamnye.
Kwiminyaka ephakathi kuka-2005 no-2012, inani labo bathi bangakholwa liye lehla ukususela ku-53 pesenti laya kutsho ku-30 pesenti.
Uphando lwamazwe onke ngaphandle kweTunisia olwenziwe yiGlobal Index of Religion and Atheism, lwaze lwapapashwa yiGallup International luquka amazwe ayi-57 amela i-73 pesenti yehlabathi.
Kutheni Abantu Bezishiya Iicawa?
Zininzi izizathu zokuba abantu bazishiye iicawa. Ziquka ukubandakanyeka kweecawa kubundlobongela nobugrogrisi, amanyala enziwa ngabefundisi, nezinye izinto. Ezinye zazo zezi:
Ukuba nemali eninzi: I-Global Index of Religion and Atheism ithi: “Xa imali isiy’ ingena, nawe ke uya unqaba aph’ ecaweni.” Ibalulekile le nto ithethwa yile ncwadi kuba imeko yezoqoqosho kumazwe amaninzi iye yaphucuka kakhulu. Unjingalwazi wezoqoqosho uJohn V. C. Nye uthi: Kwezinye iindawo, abantu baphila “ubomi obutofotofo kangangokuba abanye bookumkani ababefumile kwiminyaka engamakhulu amabini eyadlulayo bebenokufa ngumona xa benokubabona.”
OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: IBhayibhile yaprofeta isithi, “ngemihla yokugqibela” abantu babeya kuthanda imali ngaphezu koThixo nommelwane. (2 Timoti. 3:1-5) Omnye umbhali weBhayibhile owayeyazi indlela imali elugqiba ngayo ukholo wathi kuYehova uThixo: “Musa ukundinika ubuhlwempu okanye ubutyebi.” Ngoba? Uthi xa ephendula: “Ukuze ndingabi nakwanela ndize ndikukhanyele.”—IMizekeliso 30:8, 9.
Izithethe zeecawa nokuziphatha: Abantu abaninzi, ingakumbi ulutsha, bathi iicawa azincedi nganto. Abanye bayekile ukuzithemba iicawa. UTim Maguire oligosa lezeendaba kwiHumanist Society Scotland uthi: “Abantu abaninzi bayazishiya iicawa kuba abasakholelwa ukuba ziluncedo ekulungiseni indlela yokuziphatha, ingakumbi xa ujonga izinto ebezisenzeka ezicaweni kula makhulu eminyaka edluleyo.”
OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: UYesu Kristu walumkisa ngabefundisi bobuxoki, esithi: “Nobaqonda ngeziqhamo zabo. . . . Umthi olungileyo uvelisa isiqhamo esihle, kodwa wonke umthi obolileyo uvelisa isiqhamo esingento yanto.” (Mateyu 7:15-18) “Isiqhamo esingento yanto” siquka ukugxuphuleka kwiipolitiki nokwamkela izinto ezimcaphukisayo uThixo, njengobufanasini. (Yohane 15:19; Roma 1:25-27) Sikwaquka nokutshotshisa phambili amasiko nezithethe ezingancedi nganto kunokufundisa iZibhalo. (Mateyu 15:3, 9) UYesu wathi: “Yondla amatakane am ezimvu.” (Yohane 21:17) Noko ke, abantu abaninzi namhlanje abafundiswa ngoThixo.
Iicawa nemali: IPew Research Center ithi abantu abaninzi bathi iicawa ziyithanda gqitha imali. Kuphinde ke kubekho nabefundisi abaninzi abaphila ngobunewunewu ngoxa wona amarhamente ebhuqwa yindlala. Ngokomzekelo, ubhishopu wesinye isixeko saseJamani utyholwa ngokuba sesingawothiyo umlilo ngoxa wona amarhamente akhe amaninzi elamba. Le nto iye yawacaphukisa gqitha amaKatolika amaninzi alapho. Imagazini iGEO ithi eNigeria “seyiqalisa ukuba yingxaki into yabefundisi abanemali eninzi ngoxa abantu abazizigidi ezilikhulu bebhuqwa yindlala.”
OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: UPawulos owafaka isandla ekubhaleni iBhayibhile wathi: “Asingobathengisi belizwi likaThixo.” (2 Korinte 2:17) Nangona uPawulos wayengumfundisi odumileyo kwibandla lamaKristu lokuqala, wayedla ngokusebenza ukuze kungafuneki abanye bamnike imali. (IZenzo 20:34) Wayethobela umyalelo kaYesu othi: “Namkele ngesisa, yiphani ngesisa.”—Mateyu 10:7, 8.
Nawo ke amaNgqina kaYehova azeka mzekweni, ngokungazithengisi iincwadi zawo okanye ngokubahlawulisa abo abafundisa iBhayibhile. Naxa esenkonzweni akafuni nkongozelo okanye ahlawulise abantu isishumi. Kunoko, abantu banikela ngokuzithandela.—Mateyu 6:2, 3.
Kwakuprofetiwe Ukuba Abantu Baza Kuzishiya Iicawa!
Abantu ababephila kula mashumi nje ambalwa eminyaka edluleyo bebengenakuyicinga eyokuba iicawa ziza kushiywa ngabantu ngenye imini. Noko ke, uThixo wayibona kudala ukuba le nto iza kwenzeka waza wayichaza eBhayibhileni. Wafanisa zonke iicawa ezinganyanisekanga nehenyukazi elibizwa ngokuba ‘yiBhabhiloni Enkulu.’ —ISityhilelo 17:1, 5.
Le ndlela zichazwa ngayo iicawa iyazifanela kuba nangona zizibanga zikhonza uThixo, ziye zahenyuza nabalawuli beli hlabathi ukuze zifumane igunya nobutyebi. ISityhilelo 18:9 sithi: ‘Ookumkani bomhlaba bahenyuza nayo.’ Negama elithi “Bhabhiloni” liyazifanela iicawa kuba iimfundiso zazo ezininzi, njengokungafi komphefumlo, oothixo abaneziqu ezithathu, ubugqi, zonke zizinto ezaqalwa kwisixeko saseBhabhiloni yamandulo esasitshone zwabha kunqulo lobuxoki nakwiinkolelo. *—Isaya 47:1, 8-11.
IBhabhiloni yamandulo eyayibonakala inamandla yawa xa amanzi avela kuMlambo umEfrate awayeyikhusele ‘omayo,’ aza amaMedi namaPersi akwazi ukuyoyisa. (Yeremiya 50:1, 2, 38) Phofu loo nto yenzeka nje ngobusuku obunye!—Daniyeli 5:7, 28, 30.
NeBhabhiloni Enkulu ihleli “phezu kwamanzi amaninzi.” IBhayibhile ithi la manzi athetha “izizwana nezihlwele”—izigidi zabantu abakwiicawa zobuxoki. (ISityhilelo 17:1, 15) IBhayibhile yaprofeta ukuba la manzi aza koma—nto leyo ebonisa ukuba iBhabhiloni yanamhlanje sele iza kutshabalala ibe loo nto iza kwenzeka ngequbuliso. (ISityhilelo 16:12; 18:8) Ngubani oza kuyitshabalalisa? Iza kujikelwa kwazezi nkokeli zepolitiki ihenyuza nazo. Ziza kohlutha yonke into enayo, okanye zidlakaze inyama yayo.—ISityhilelo 17:16, 17. *
Amanzi aseBhabhiloni awuthayo amela inkitha yabantu ephumayo kwiBhabhiloni Enkulu
Ekubeni iBhabhiloni Enkulu iza kutshabalala kungekudala, uThixo ulumkisa abantu esithi: “Phumani kuyo, bantu bam, ukuze ningabelani nayo ngezono zayo, nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo.” (ISityhilelo 18:4) Uphawule phofu ukuba igama elithi “ukuze” livela kabini apha? Isilumkiso silkaThixo siya kubantu abafuna ukuthandwa nguThixo abaphazanyiswe ziimfundiso zobuxoki—njengoGaffar noHediye ekuthethwe ngabo ngaphambili.
Ngaphambi kokuba afunde iBhayibhile, uGaffar wayecinga ukuba uThixo ufanele ahlonitshwe kuba nje esoyikwa. Uthi: “Ndavuya xa ndeva ukuba uYehova nguThixo obathandayo abantu ibe ufuna simthobele kuba simthanda.” (1 Yohane 4:8; 5:3) UHediye waxola xa weva ukuba asingoThixo owamenza waba yinkedama, kwaye nemeko akuyo yayingasekwanga kwangaphambili. Zamthuthuzela neevesi zeBhayibhile ezinjengoYakobi 1:13 othi, uThixo akabalingi abantu ngezinto ezibuhlungu. Yena noGaffar baqalisa ukufunda iBhayibhile baza baphuma ‘eBhabhiloni.’—Yohane 17:17.
Xa iBhabhiloni Enkulu itshatyalaliswa abayi kuchatshazelwa ligazi abo baye baphuma kuyo baza ‘banqula uBawo ngomoya nangenyaniso.’ (Yohane 4:23) Banethemba lokubona umhlaba ‘uzaliswe kukwazi uYehova njengamanzi egubungele ulwandle.’—Isaya 11:9.
Iicawa zobuxoki kunye neemfundiso zazo ziza kutshabalala, kuba uThixo ‘akanakuxoka.’ (Tito 1:2) Lona unqulo lokwenene luya kuhlala ngonaphakade!
^ isiqe. 16 Ukuze ufunde okungakumbi ngeBhabhiloni Enkulu nangoko iBhayibhile ikufundisayo ngabafi, ngokuba unjani uThixo, nangobugqi, funda incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Iyafumaneka nakwi-intanethi ku-www.jw.org/xh.
^ isiqe. 18 Jonga umxholo othi “Okufundiswa YiBhayibhile—Isiphelo Sehlabathi,” kulo Vukani!
Yintoni IBhabhiloni Enkulu?